DHAGEEYSO:- Prof. Cali Khaliif Galeyr oo hadalo hanjabaad ah u jeediyay maamulka Somaliland.
on September 06 2013 Xildhibaan Cali Khaliif Galeyr oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa hanjabaad tii ugu cusleyd u jeediyay maamulka Somaliland, isagoona ugu hanjabay inay caqabad xumo kala kulmi doonaan dhibaatooyinka ay ku haayaan shacabka kasoo jeeda maamulka Khaatumo State.
Xildhibaan Cali Khaliif Galeyr ayaa sheegay in shacab badan oo kasoo jeeda gobalada Khaatumo State ay ku xir-xiran yihiin xabsiyada ay maamulaan Somaliland, isagoona tilmaamay in dadkaasi loola dhaqmo si bin'aadanimada ka baxsan.
"Laasacaanood kaliya ma ahanee, xabsiyada Burco, Mandheera iyo Hargeysa ayaa waxaa lagu dhibaateeyaa caruurtayada iyo haweenka jilicsan oo uur leh, war waxaas ma ahan wax nasoo maray oo ay umad Soomaaliyeed ama Islaam ah ay ku dhaqanto" Sidaas waxaa yiri Xildhibaan Cali Khaliif Galeyr.
DHAGEEYSO HADALKA XILDHIBAAN CALI KHALIIF GALEYR
Wuxuu sidoo kale hadalkiisa ku daray in Somaliland ay shideeyso dab iyo dhibaatooyin ay ka dhex wado gobalada Sool, Sanaag iyo Ceyn, isagoona taasi ku tilmaamay inay horseedi doonto in deegaanada ay Somaliland maamusho inay ka dhacaan dhibaatooyin horleh oo ay iyaga mas'uuliyadeedu qaadi doonto.
"Dhibaatada aad wadaan iyo dabka aad ka hurineeysaan gobalada Sool, Sanaag iyo Ceyn, waxa uu ku dambeeyn doonaa Hargeysa, Burco, Barbera iyo Gabiileey, marka ma ahan mid aynu anagu wadno ee idinka baa dhibaatadaasi abuuraya" Ayuu hadalkiisa ku daray Xildhibaan Cali Khaliif Galeyr.
Xildhibaan Cali Khaliif Galeyr ayaa ugu dambeeyn baaq u diray dhamaan shacabka kasoo jeeda deegaanada maamulka Khaatumo State, inay ka qeyb qaataan sidii ay u difaaci lahaayeen dadkooda ay dhibaateeynayaan maamulka Somaliland, iyadoona dhinaca kale maamulida gobaladaas ay isku haystaan Somaliland iyo Puntland.